I-PHOTOSHOP, IICLEVER ANGLES KUNYE NEZINYE IINKOHLISO ZOKUFOTA KWIARHENTE YOKUTHENGISA IZINDLU NOMHLABA - IZINDLU EZITHENGISWAYO
Umthengi weKhaya ulumke: Ulahlekisa amaqhinga okuFota kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba
Uludwe lwe-intanethi yendlu lufana neprofayili yokuthandana kwi-intanethi. Awunakuze uxoke- kungcono ubeke ulindelo oluthembekileyo- kodwa uqinisekile njengokuba isihogo siza kwenza imeko yakho ibonakale intle kangangoko. Oko kuthetha ukuba ii-angles ezincomayo, ukuhlela okungenanceba kwaye, ewe, mhlawumbi iPhotohop encinci.
Ukuba ukhangela kuluhlu lwasekhaya ukufumana iphupha lakho lasekhaya, Nazi izinto ezimbalwa omele ulumke kuzo xa kufikwa ekufotweni kwezindlu.
Mhlawumbi kukubhena isibheno, mhlawumbi yi-Photoshop.
Isoftware yokuhlela ifoto yenza kube lula ukunika iifoto zangaphandle ngaphandle kwe-oomph. Ukuphinda usebenzise kwakhona okulula ingenza ingca ibonakale igcwele kwaye iluhlaza ukuba kukho ingca emdaka okanye enamachokoza. Ukuba iifoto zathathwa ngemini eshushu, i-Photoshop inokuphinda ibambe isibhakabhaka ukuze sikhangeleke ngathi siqaqambile kwaye sinelanga. Imibala engaphandle kwendlu inokukhanyiswa nayo, yenze ukuba ipropathi ibonakale inomtsalane ngokubanzi. Akukho nto ilahlekisayo malunga nalo mkhuba - wenza nje ukuba ikhaya libukeke ngokungathi lenza olona suku lubalaseleyo, olukhanyayo- kodwa ngokuqinisekileyo inokuba yinto engathandekiyo xa ekugqibeleni ubona ikhaya lomntu ngosuku olungaphantsi kweenkwenkwezi.
Imbono yiyo yonke into.
Ngaphandle kwamehlo, ngaphandle kwengqondo, akunjalo? Umfoti onetalente angazicima ezinye iziphene zekhaya ngokukhwela nje ileli, ulale phantsi okanye ujike nje kancinci ukuze uthathe isithombe. E-Australia kunyaka ophelileyo, uluhlu lwendlu lubonisa ifoto ethathwe kwikona ephezulu kakhulu, ethi igubungele ngokupheleleyo inqaba enkulu yamanzi eza ngqo ngasemva kwekhaya . Ke kukho eli khaya eJapan, elibandakanya ngokubulela iifoto ezimbini zedama layo -Enye apho ibonakala ijongeka ngathi ivulekile kwaye iphangalele, kwaye enye (ethe kratya) ifoto yokumiselwa komntwana ngaphezulu komhlaba. Ukuba ukrokrela ukuba ii-angles zeefoto zifihla into kuluhlu, ungandwendwela ikhaya okanye, kwezinye iimeko, mane utsale idilesi kwiGoogle Street View.
(Ityala lemifanekiso: UAlexandre Rotenberg )
Ikhamera yongeza iinyawo ezikwere.
Eli lelona qhinga liqhelekileyo lokufota oza kulibona kuluhlu lwezindlu: Iifoto zangaphakathi ezithathwe ngelensi ebanzi zingenza igumbi libukeke likhulu kakhulu kunokuba libonakala. Kungenxa yokuba umfanekiso ovela kwilensi ebanzi ye-engile iyakwazi ukubamba indawo enkulu yombono kunokuba inokubonwa liliso lomntu. Ilensi ebanzi ithatha ngaphezulu kwegumbi, isenza indawo yonke ibonakale inkulu. Iindaba ezimnandi: Kulula kakhulu ukubona imizekelo emangalisa ngokwenene kumakhaya aqhelekileyo. Xa izinto ezikufutshane nelensi zikhangeleka zinkulu kakhulu-kwaye izinto ezikude zibonakala zincinci ngokungaqhelekanga kwaye zikude-amathuba okuba igumbi olijongileyo liya kuba lincinci emntwini kunokuba libonakala kwifilimu.
USara Landrum ngumbhali osebenza yedwa kunye nebhlog. Ukwangumsunguli webhlog yakhe yobomi kunye nendlela yokuphila, Iwotshi ebekiweyo . Ingcebiso malunga nokwenza umsebenzi owuthandayo kwaye onwabile ngawo, rhuma Kwincwadana kaSara kwaye umlandele kwimidiya yoluntu.
Iithayile zangaphantsi kwendlela yokuhambisa ngenqanawa: Iifeksi zoNyango onokuzenza Ungayenza nge-DIY
Sebenzisa ifowuni yakho njengeialamu? Nasi isizathu sokuba ufanele ukuyeka
Iindlela zeSmart zokugcina isanti elunxwemeni (kwaye ngaphandle kwendlu yakho!)
Amacala: Ityala lokuguqula ukujonga kwakho nkqo
I-1212 inombolo yamadangatye
Ithetha ntoni i-7-11
kuthetha ntoni xa ubona ingelosi
ndihlala ndibona i-333
uluhlu lwazo zonke iingelosi
Ithetha ntoni i-111 kwinombolo